မြတ်စွာဘုရားရဲ့ သဘောထား	Posted on April 16, 2013	by mettayate မြတ်စွာဘုရားရဲ့ သဘောထား
အဲသလို သအပေါ်ယံ နာမည်တပ်တာလောက် ဦးစားမပေးတဲ့ အထောက်အထားတွေ အများကြီးရှိတယ်၊၊ Similar Post In English Version : Please Click Here
“ တပည့်တော်ကို ရတနာသုံးပါး ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်တဲ့သူလို့ မှတ်ပါ ” တဲ့။ အဲသလိုပြောတော့ မြတ်စွားဘုရားက “ ဥပါလိ သင်ဟာညဏ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်၊၊ ထင်ရှားကြော်ကြားတဲ့သူလဲဖြစ်တယ် သင်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာ အလျှင်စလို မလုပ်သင့်ဘူး။ စဉ်းစဉ်းစားစား လုပ်သင့်တယ်။ ”
အဲဒီတော့ ဥပါလိက ဘယ်လိုပြန်ပြောသလဲဆိုတော့ “ အရှင်ဘရားတပည့်တော်လို လူတစ်ယောက်ကို တခြားဘာသာတွေက သူတို့ဂိုဏ်းဝင်အဖြစ်နဲ့ တပည့်တော်ကိုရသွားမယ်ဆိုရင် မြို့ထဲမှာလှည့်ပြီးတော့ ဥပါလိတော့ သူတို့ဂိုဏ်းထဲဝင်လာပြီဆိုပြီးတော့ လှည့်ပြီးကြွေးကြော်မယ်တဲ့ အရှင်ဘုရားက စဉ်းစားပါအုံးလို့ဆို တော့ အင်မတန် အံ့သြပါတယ် ဘုရားတဲ့ ” အဲဒါကိုကြည့်ရင် မြတ်စွာဘုရားရဲ့ သဘောထားက အပေါ်ယံနာမည်ခံလိုက်တာကို လုံးဝဦးစားမပေးဘူး။ နာမည်ဟာ ပညတ်ပဲ အပေါ်ယံပဲ လူ့အတွင်းစိတ်ထဲမှာ တကယ် လေးလေးနက်နက် သဘောပေါက်တာ၊ နားလည်တာ မပါရင် ဘယ်လောက်မှ ခိုင်မြဲမှာ လည်းမဟုတ်ဘူး” တဲ့။
ဒါနဲ့ဥပါလိက ဒုတိယအကြိမ် ထက်ပြီးလျှောက်တယ်၊ သူ့ကိုရတနာသုံးပါး ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်သူလို့ မှတ်ပါတဲ့။ အဲလိုပြောတော့ မြတ်စွာဘုရားက “ ဥပါလိ သင့်အိမ်ဟာ နိဂဏ္ဏ တို့အတွက် လမ်းလေးခွဆုံမှာ တူထားတဲ့ ရေတွင်းလို ပဲ အချိန်မရွေး ၀င်ထွက်ပြီး တော့ အလိုရှိရာကို အလှူခံရတဲ့ အိမ် ဖြစ်နေတယ် အဲဒီတော့ သင်ဟာ ရတနာ သုံးပါးကိုပင် ဆည်းကပ်သော်လည်း အရင်တုန်းက လိုပဲ နိဂဏ္ဏ တို့ကို ဆက်လက်ပြီးတော့ လှူဒါန်းထောက်ပံ့သင့်တယ် ” တဲ့။ ***
“ ငါ့ကိုလှူတာပဲ မြတ်တယ် ၊ ငါတပည့် ရဟန်းသံဃာတွေကိုလှူတာပဲ မြတ်တယ်လို့” ကြားခဲ့ရပါတယ် ဘုရား အခုမြတ်စွာဘုရားနှုတ်တော်ကမိန့်တာကို ကိုယ်တိုင်ကြားရတော့ တခြားဆီဖြစ်နေပါတယ်ဘရား၊ ဒါကြောင့်လဲ မြတ်စွာဘုရားကို ပိုကြည်ညိုပါတယ်ဘု၇ား။ အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလှူတာတော့ တပည့်တော်သင့်တော် သလိုကြည့်လုပ်ပါမယ်တဲ့ သူဆက်ပြီးတော့ နိဂဏ္ဏတိုိ့ကို လှူပါတယ် ၊ ဒါပေမဲ့ အရင်လိုတော့ ဆရာအနေနဲ့ မကိုးကွယ် တော့ပါဘူး။
“ ငါဘုရား တရားနဲ့ ၀ိနည်းတော်တိုိ့ကို ဟောထားပြီးပြီ။ ငါဘုရားမရှိတော့တဲ့အခါမှာ တရားနဲ့ ၀ိနည်းဟာသင်တို့ဆရာပဲ။ အဲဒီတရားနဲ့ ၀ိနည်းကိုပဲ ဆရာအဖြစ်နဲ့ ထားပြီးနေတော့ ” လို့ မိန့်တော်မူတယ်။ ဘယ်သူ့ကိုမှ ဘုရားရဲ့ ကိုယ်စားနေရာမှာမ ထားခဲ့ဘူး။ ပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲကို အားမပေးခဲ့ဘူးနော်။
http://buddhismworld.ning.com/profiles/blogs/6371237:BlogPost:170990 မှ ကူးယူဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ Like this:Like Loading...
This entry was posted in ဗုဒ္ဓ သြ၀ါဒများ. Bookmark the permalink.	← Dhamma Is For Everyone